Fartaag: Shirka Garbahaarey waa sharci darro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Fartaag: Shirka Garbahaarey waa sharci darro
24th September 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Maamulka KMG ah ee Jubba ee fadhigiisu yahay Kismaayo ayaa ka digay xiisad colaadeed oo sida uu sheegay ka dhalan karta shir qabanqaabadiisa ka socoto degmada Garbahaarrey ee gobolka Gedo.
Hoggaamiye ku xigeenka koowaad ee maamulka, Cabdullaahi Ismaaciil Fartaag oo kazoo jeeda gobolka Gedo ayaa sheegay in gobolkaas uu ka socdo qabanqaabada shir la doonayo in lagu carqaladeeyo shirweynaha dib u heshisiisiinta ee ka socda magaalada Kismaayo.
Fartaag ayaa ku tilmaamay shirka Garbahaarrey mid sharci darro ah oo ay wadaan dad uu ku tilmaamay inay leeyihiin ‘dano gaar ah’.
Wuxuu sheegay in shirka Kismaayo uu yahay shir ay taageertay dowladda federaalka iyo beesha caalamka. Shirka Kismaayo ayuu sheegay inuu yahay mid u furan cid kasta oo ka soo jeedda deegaannada Jubbaland oo qabta cabashooyin ka dhan ah maamulka Jubba.
Wuxuu xusay inaan gobollada Jubbooyinka looga baahnayn colaad hor leh, ee loo baahan yahay in loo istaago sidii loo samatabixin lahaa dadka ay abaartu saameysay.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada Garbahaarrey gaarayey ergooyin ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Federaalka, kuwaasoo sheegay iney qabanayaan shir lagu nabadeynayo beelaha dega gobolka Gedo.
Jeneraal ka tirsanaa jiray ciidamadii Soomaaliya oo ku geeriyooday Imaaraadka Carabta
The People’s Climate